SAMOTALIS: Himilladaa Gundhig u Ah Awoodda Guusha
Himilladaa Gundhig u Ah Awoodda Guusha
W/Q. Nasra Qawdhen
Ina Nebi-aadan Inta uu Nool yahay iyo meel kasta oo uu ku nool yahay waxa uu leeyahay Han iyo Himillo uu ku hammiyayo inuu gaadho, waxa uu leeyahay Min-qiyaas uu doonayo inuu hadhsado oo uu u arko in horumar uu ka gaadhi karo isla markaana naftiisa/teeda, dadkiisa/keeda & dalkiisa/keedaba Anfacaysa.
Marka laga hadlayo kalsoonida naftu, waa shidaalka dhaqaajiya horumarka mana ah inuu noqdo mid fudud waa inaad u aragtaa naftaada mid wax soo kordhin karta, horumar gaadhi karta, noqon kartana qof qiimo u leh bulshadiisa. Wadankiisuna ku faani karo, haddaba sideen u gaadhi karnaa kalsooni buuxda? Waa su'aal hubaal ah inaad is waydiiso
2: Himillo Cad
Marka laga hadlayo himilada waxa muhiim ah inaad ka yeelato ama aad ogtahay waxaan aad doonayso inaad ku guulaysato waxa uu yahay, maaha inaad iskaga fikirto uun waxaan rabaa inaan guulaysto lakiin anad hubin waxan aad doonaysa waxa uu yahay, waayo suurto gal maaha inaad nolosha oo dhan ku guulaysato ee waa inaad si khaas ah u garato waxan aad doonaysa waxa uu yahay adigoo ku dabakhaya awoodaada(rabitaankaaga dhabta ah) aad u leeyahay inaad ku guulaysato hawshaas.
3: Muddada Himillada lagu Gaadhi Karo
4. Maaraynta Wakhtiga
a. Qoddobee Hawlahaad doonayso inaaad ku guulaysato
b. U sii kala qaybi habka ay isku raaci karaan
c. Ahmiyad kala sii sida aad u aragto inay u kala hor mari karaan
d. Dib u hubi oo ka dhig mid wata wakhti qaabeed
e. Joogtee oo ugu hawl gal si xidhiidh ah wakhtiga aad u xaddiday.
Qoddobadaasi waxay yihiin kuwa kugu hagaya inaad ku guulaysato himilladdaada iyo hiigsigaaga waana muhiim inaad qaab qorsheed dejiso marka aad doonayso inaad ku guulaysato nolosha iyo himillooyinka kala duwan ee ay wadato.